YC-170 mpamokatra milina mofomamy kely vita amin'ny jiro kristaly tsara indrindra. Yucheng
Hoppers roa dia vita amin'ny fitaovana UPE Alemanina, mifanaraka amin'ny fenitry ny fiarovana ny sakafo Iraisam-pirenena, tsy miraikitra, mora potika sy apetraka.
Ny milina koa dia afaka manampy hopper, izay afaka mamokatra sakafo famenoana roa sosona, na sakafo miloko roa miaraka amin'ny famenoana iray.
YC-170 mandeha ho azy Crystal Moon Cake Machine dia multi-miasa izay afaka mamokatra karazan-tsakafo isan-karazany toy ny mooncake, baolina akoho nofonosina fromazy, baolina fromazy, baolina akoho, baolina proteinina, maamoul, cookies feno, maamoul, mochi na gilasy mochi, daty baolina, cookies panda, coxinha, croquettes, kibbeh, loko roa miaraka amin'ny cookies feno sôkôla, cookies cookies sôkôla, sns.
Ny milina Shanghai Yucheng dia manam-pahaizana momba ny milina fanaovana Mooncake, raha toa ka misy filanao ao amin'ny milina fanaovana Mooncake, azafady aza misalasala mifandray aminay!
Mandeha ho azy manao mooncake machineconsists ny mandeha ho azy encrusting milina, mandeha ho azy mpamorona milina, ary mandeha ho azy mandrindra milina. Ny milina mooncake dia afaka manamboatra endrika sy haben'ny mooncake amin'ny alàlan'ny bobongolo fanovana. Ny milina mooncake dia afaka manamboatra vokatra tsara hafa toa ny maamoul, mofomamy mananasy, sns.
Fitaovana milina fanaovana mooncake:
1. Ny milina encrusting mandeha ho azy dia afaka mamokatra karazan'entana famenoana isan-karazany, toy ny mooncakes fonosana, mofomamy mametaka, mofomamy mofomamy, mofomamy kristaly, mofomamy miaraka amin'ny daty sinoa mihoampampana, mofomamy mofomamy miaraka amin'ny mananasy, dumpling misy steamed miaraka amin'ny pea meshed, mofomamy mena, mofomamy baolina hena baolina vary sns. Izy io dia masinina maro-miasa izay afaka manao bika bika, endrika boribory, endrika bara mitohy, endrika telozoro sns.
Ity milina ity dia mandray ny fiasan'ny masinin'olombelona, ​​manana fahatsiarovana vokatra an-jatony izy, noho izany mora ny mandray azy araka ny sary aseho, ity milina ity dia mateza, mora ampiasaina ary ny singa rehetra mifehy indrindra dia ireo malaza eran-tany, izay manome antoka lehibe ny fotoana maharitra sy ny fandidiana mahazatra.
2. Ny milina mpamorona mandeha ho azy dia ampiasaina handrafetana ireo vokatra fonosana aorian'ny encrusting amin'ny alàlan'ny fanindriana ny ambony sy ny ambany amin'ny alàlan'ny bobongolo izay azo atao amin'ny endrika samihafa.
3. Ny milina fandefasana lovia mandeha ho azy dia ampiasaina amin'ny fametrahana azy ireo vokatra ao anaty lovia ho azy. Izany dia nitahiry tsara ny vidin'ny asa sy ny famokarana vidiny, ary hialana amin'ny fikasihan-tanana mivantana an'ireo vokatra miteraka fahavoazana mety hitranga.
Teo aloha: YC-170-1 Cookies Ultraonic Cookies Cutter gilasy Masinina Cookies
Manaraka: YC-307 bara famokarana angovo marobe
milina mofomamy kristaly
Masinina mofomamy volana Crystal
YC-168 Surimi Fishball Encrusting Mac ...
YC-170-2 milina mandeha ho azy encrusting voanjo Pist ...
Milina fanaovana Kubba Kibbeh Kubbeh Kubbeh kely mandeha ho azy
YC-168 Masinina Encrusting mandeha ho azy